Hofisi 2016 inosangana nematambudziko muOS X El Capitan | Ndinobva mac
Microsoft iri kushanda kuyedza kugadzirisa Hofisi 2016 bugs paMac
Miguel Angel Juncos | | apuro, Noticias, Zvimwe Zvirongwa zveMac, dzakawanda
Anenge vhiki rapfuura OS X El Capitan yakaburitswa kuruzhinji uye pamusoro pekuvandudza kwayakaunza nayo panguva iyoyo, zvakare anga aine dzimwe "run-ins" ine software yakamboshanda nemazvo muOS X Yosemite, muenzaniso weizvi tinawo muHofisi 2016, hofisi yeMicrosoft suite.
Vashandisi veizvi Hofisi 2016 yeMac Ivo vakasangana nezvikanganiso zvakakomba pakushandisa software, zvese zviri zviviri Izwi, Excel, Outlook uye PowerPoint vari kutambura kutonhora, kunyangwe vashandisi vane Hofisi 2011 zvakare vane rimwe dambudziko neAptlook muOS X El Capitan. Zvinyorwa zvakasiyana zvakagamuchira zvichemo kubva kune vashandisi pamusoro peiyo yakavhurika tambo pane Microsoft rutsigiro webhusaiti kutaura pamusoro pematambudziko akasiyana.
Microsoft inoziva nezveaya matambudziko nesoftware yayo uye yanga ichipindura zvichemo zvakasiyana yevashandisi. Mune tambo yakavhurika pane webhusaiti yekutsigira, Microsoft Chirongwa Manager, Faisal Jeelani, akataura kuti kambani iri kushanda nesimba neApple kugadzirisa matambudziko aya, asi ndokuti hapasati paine nguva yakatarwa yekupa mhinduro.
Isu tinoziva kuti vamwe vashandisi vanogona kunge vari kusangana nematambudziko neHofisi 2016 yeMac pavanomhanya paEl Capitan. Tiri kuongorora nyaya iyi neApple. Kusvikira paine mhinduro, vanhu vanokurudzirwa kuisa yazvino Hofisi 2016 yeMac inogadziridza vachishandisa Microsoft AutoUpdate.
Matambudziko anotangira pakurongeka kusingaite, nepo vamwe vashandisi ivo havana kana kukwanisa kuvhura chero chirongwa Hofisi. Kune rimwe divi uye kunyanya Outlook, mashandisiro ane matambudziko mazhinji, kunyangwe vashandisi veOfisi 2011 mune dzimwe nguva havagone kuwana avo emabhokisi.
Parizvino mhinduro ndeyokuisa vhezheni yapfuura, kureva, Hofisi 2011 (usingashandise Outlook semaneja wemail) uye mirira Microsoft kuburitsa chigamba chakajeka chinogadzirisa iyi mamiriro ekugadzirisa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Microsoft iri kushanda kuyedza kugadzirisa Hofisi 2016 bugs paMac
Joseph Agudo akadaro
Iyo njodzi, sungirira kumusoro, zvinotora nguva yakareba kuvhura chero application ... nekuda kweAptlook 2016 ini ndawana Airmail uye nekuti hapana imwe nzira inogamuchirwa yekugona uye kutaura kuti kana zvisiri ...
Pindura kuna Jose Agudo
- Iyo yekuzvarwa kunyorera, Tsamba, hairatidze mameseji kubva kuVIP vanofambidzana.
- Mapikicha anovhurika otomatiki kana iwe ukabatanidza iyo iPhone kunyangwe iwe usina mafoto ekurodha pasi
- Simba iri rinononoka kupfuura yazvino vhezheni yeYosemite.
- Cleanmymac 3 haishande uye inofanira kutorwa pasi nekuiswa zvakare.
- Iwo mamwe anoita kunge anoshanda, asi kwete yakawanda yekuita kuwana.
Pindura kuna RaúlG
- Ini zvakare ndine matambudziko ekupunzika neiyo nyowani «Split Screen» kana zvasvika pakuona hofisi application.
- Matambudziko se Autodesk Autocad, akarembera.
Ismael Palacios-Baeza akadaro
Ini ndinofunga ndiri kuenda kunodzika Mac yangu uye kuchinjira kuPc, senge shamwari zhinji nevanozivana vakurudzira. Ndakatenga MacBook seyishandiso yebasa uye ndakave nepfungwa yakaipa yekumisikidza Kaputeni izvo zvakakonzera matambudziko akadaro neIzwi zvekuti ndiri mudambudziko rakakura nekuzvipira kwangu kwebasa. Ini ndinofunga hazvina basa neApple kuvhura inoshanda system inokonzeresa matambudziko neOfisi, iri, pasina mubvunzo, suite rinonyanya kushandiswa pasi rese. Chii chinonzi Apple? ichagara seVolkswagen here?
Pindura kuna Ismael Palacios Baeza
Apple inofanira kutsikisa sisitimu yekudzoka, kubva kuEl Capitan, kune iyo yapfuura vhezheni yeOSX 10 iri yakanaka. Ini ndinofunga ndiyo chete nzira yekubhadhara vasina kungwara vakamboshanda seGuinea Nguruve »
Leo Echevarria akadaro
Ndine matambudziko akakomba kubva pandakagadza kaputeni, handikwanise kushandisa Izwi uye rinotonhora nguva dzese, zvekuita kuzvigadzirisa? batsiraaaa¡¡¡¡¡
Pindura kuna Leo Echevarria
Pandinogadzirisa dambudziko rinotevera, dhawunirodha Hofisi 2016 uye kana ndichiedza kuisa, ndinowana meseji inondiudza kuti hofisi haienderane neOS X, inondiudza kuti ndinofanira kurodha pasi Window, pane chero nzira yekumhanya nayo uchishandisa iyo Mac inoshanda sisitimu?
Ini ndinoshandisa simba poin kumisangano, ini ndine Mac, ine oofice 2016 inoenda zvinouraya, ini ndakagadzirisa El Capitan uye chii chandingaite zvakafanana kana zvakanyanya?
Iyo njodzi, kukunda 2016 haiverengi mamwe mafaera, uye kana ikaaverenga inoita saizvozvo nezvikanganiso. Ini ndakabatana neinternet technical technical, ndakatsanangura kuti ini ndaigona kuvhura iro faira uye nevamwe vane chero vhezheni kubva pamberi pa2016. Mushure mekundigonesa kushanda nedzimwe nzira dzakasiyana, akandiudza kuti dambudziko raive nefaira. Ndakamuudza kuti faira iri raishandiswa nevanhu vazhinji uye hapana kana nematambudziko. Akasimbirira kuti ndiongorore mafaera angu, ndine makumi mashanu emafaira ekuti ndiongorore. Zvakanaka nemhinduro iyoyo ndakaenda kuchitoro chema maconline muAlto de las Condes de Santiago de Chile, mushure mekutambisa nguva nedzimwe nzira zhinji, akandiudza kana ikavhurwa neNhamba, idambudziko rakanakisa uye faira raakavhura rakandiudza kuti dambudziko raive rakapfuura asi kuti hapana chavaigona kuita. Taura nemaneja wechitoro, akati, "Faira ravakakutumira rinobva kumac here? Ndakapindura kuti haana kundiudza »pane dambudziko, kana zvisiri kubva mac kusvika mac hazvishande? Ndakafunga kuti takakanganisa kupihwa mhinduro iyoyo. Dambudziko kwaari nderekuti aive nemaMac maviri, rimwe riine dhiri 50.000 uye rimwe riine shasha 2016 uye ndakamuratidza kuti na2011 kana akavhura uye na2011 kwete. AKANDIUDZA, HATINOGONESESA KUITIRA CHINHU KANA KUTI TIDZIDZISE MARI KANA KUTI TIMISE IMWE. GO TO Hofisi. uye pano ndiri nekombuta ichangobva kutengwa nemutengo uri padyo neUS $ 2016 uye handigone kushanda pairi.
Ini ndanyadziswa zvikuru neMAC uye neOFISI uyezve neiyo yekupedzisira handina imwe nzira yekushandisa.
Ndine Mac bhuku pro retina 13 ″. Kunyadziswa zvachose, neMac sekune Office 2016. Ini ndaive nani nepc yangu ine kukosha kwe25% yeiyi nyowani michina. Vaviri vanopa mhosva vanopomera, hapana anopindura. Iyo komputa inopunzika, Excel yakapenga, kuvhura email imusoro, kana uchinyora mafaera haichengetedze zita uye zvadaro harioneke, nezvimwe, nezvimwe, nezvimwe.
Pindura kune Seafood
Kufanana neiyi hofisi 2016, zvinonyadzisa kuti Apple neMicrosoft zviite chimwe chinhu kana kudzorera mari yakabhadharwa kuti ishandiswe, handigone kushanda muhofisieeeee uye OS ye Macbook Pro inogadziridza iyo CAPTAIN uye zvinosemesa.
REINALDO WAKAGadzirisa CHINANGWA HERE?
Chokwadi ndechekuti ini ndichiri kunyadziswa, nekuti mari yekudyara ndeyekuti uve nechimwe chinhu "chakanaka" uye chokwadi chinosiya chakanyanya kudiwa, ndine mhepo yemacbook kwemwedzi mitatu neHofisi 2016 yakaiswa, uye chokwadi ndechekuti, software iri inononoka, Dzimwe nguva inonamira, iyo imwe macbook "inonamira", uye chokwadi ndechekuti hautombodi kuishandisa.
Pedro Antonio Manrique chigadziri chemufananidzo akadaro
Ini ndakaisa OSX CAPITAN uye zvino Office POWER POINT uye WORD zvakamira kushanda. Ndokumbirawo mundibatsire, ndine basa rekuzvipira. Ini ndinogona kudzokera kuOSX YOSEMITE?
Pindura Pedro Antonio Manrique
HAUGONI KUVA! Tsamba iyi yakaburitswa muna Gumiguru 6, 2015, ndiAugust 2016 uye dambudziko richienderera mberi ... kugona kuri kundipengesa !!! Pakutanga dambudziko rakanga riri rechinguva, mushure mekuvandudzwa kwandakagamuchira neupenzi, handichakwanise kushanda nemazvo, ndinopedza nguva yakawanda nenguva zhinji zvekuti software yacho inotangwazve. Neye iyo rezinesi rehofisi rinodhura, ndingadai ndakatenga PC ine zvombo nehofisi yepirate uye ndinenge ndichishanda ndakadzikama sezvinobvira ...
Pindura kuna Flowerade
Javier Moreno akadaro
Icho chaicho fiasco, hofisi ine mac os capitan.
Pindura jaiver moreno
Fernando Palma chinobata mufananidzo akadaro
mangwanani, ndinoda rubatsiro.
Izwi rinoshanda zvakashata zvakanyanya uye ini handina kukwanisa kusevha zvinyorwa kana sepakutanga kana nerimwe zita refaira.
Ndingafarire rubatsiro rwenyu.
Pindura kuna Fernando Palma
Inhamo yakadii iyi pod inogona kuve isina basa uye ita kuti vatitengese yakasarudzika isingaputi uye zvinonzwisisika kuti haishande nekuti inokuvadza mafaera edu imwe inotaridzika yakaipa neMac yako hombe isingashande uye ichivhara mafaera ndapota mumwe munhu ndibatsireiwo Ini ndatotenga hunhu kuvandudza kunyoreswa uye iyi pod inoti haienderane neshoko ne mac asi chete kuti igone kana ikavhura kuti ndinobatsira
Kwete chete iro izwi rinopfuura zvakanyanya, rinovhura asina kukwana mafaira. Zviripachena hapana anopindura. Chinja kuhofisi 2011.
Ismael Sanchez Hernandez akadaro
MuIzwi, ini handiwane vhidhiyo yekumashure pakusarudza zvinyorwa zvekugadzirisa. Zvandinogona kuita. Ndine 27 'iMac retina.
Pindura kuna Ismael Sánchez Hernández
Ini ndichangotenga macbook yakamboshandiswa, kubva muna 2012, uye ndine dambudziko rakafanana nehofisi, ndakafunga kuti pandichachinjira kumac ndicharega kuva nemhando dzematambudziko, kana mhinduro ikaonekwa ndapota ndiudzei nenzira iyi.
Pindura kune arismendy
JF Bradfer akadaro
Ndine MacOS Sierra ine Hofisi 2011. Yakashanda pasi rose mushe kudzamara ndafunga kugadzirisa OS sezvakakurudzirwa neAppStore. Uye kubva ipapo matambudziko neOffice akatanga. Outlook inoramba ichindibvunza kurodha pasi mafonti matatu echiChinese andisingashandise, Izwi rinoremadza chiperesi cheki, Excell dzimwe nguva haiteedzere mafomula kubva kune imwe sero kuenda kune imwe, ichingoendesa kukosha kwakapfuura Zviripachena kuti hapana 3% kuenderana pakati peMac OS neMicrosoft Office. Ini handichashinga kugadzirisa software. Ini ndinoshamisika kana paisazove nerunyararo rwekutengesa hondo pakati pemakambani maviri aya. Microsoft inosungirwa kugadzira chigadzirwa chinowirirana cheMac, kuti irege kugadzira monopoly paPC. Microsoft inogona kubhadhariswa kana ikasadaro. Asi nezvikanganiso izvi, maitiro ekuratidzira kuda kwekugadzira software isina kugadzirwa uye isingawirirane kuti ibudise kukanganisa kwekutengeserana kuMac? Izvo zvakanyanya kuoma kuratidza chinangwa ...
Pindura JF Bradfer
Gerardo Garcia akadaro
Hazvigone kuitika kuti isu tatova muna Gumiguru 2017 uye matambudziko achiri kuenderera! Ini ndichafanirwa kumirira hofisi 2018? Chinhu chakanaka ndechekuti kune Windows uye kunyangwe Linux!
Pindura Gerardo García
Mumwe munhu anopindura mhinduro, ini ndine dambudziko muOS sierra ine hofisi 2011, muchina haushandi uye iyo diki balcony inondinetsa, muchidimbu, ndiro dambudziko.
Recontra inotsamwisa, inopfuura haivhure pane yangu Mac, zvinoita sekunge paive nekanganiso isingatarisirwe, zuva rese ndakapedza kutsvaga mhinduro uye hapana. Batsirai !!!!
FaceAlert yemahara kwenguva pfupi
Iyo Yese Kutsvaga kweiyo nyowani Apple TV inowana kukosha